कपिलवस्तुको निर्वाचनमा कसले कति मत पाए ? | Press Pati
कपिलवस्तुको निर्वाचनमा कसले कति मत पाए ?
२०७७-१२-२६ ०८:४१ मा प्रकाशित
कपिलवस्तु २६ चैत ।नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तुको महिला उपाध्यक्ष र ७ जना सदस्यकालागि भएको निर्वाचनमा संयुक्त प्यानलका सबै उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । जस अनुसार उपाध्यक्षमा स्वयेता योगीले ९७ मत ल्याउनु भएको छ । प्रतिस्पर्धी शारदा केसीको ५५ मत आएको छ ।
यस्तै सदस्यमा पार्वती आचार्यले १२६ मत ,मनिष कार्कीले १२०मत ,कृष्ण पौडेलले ११४ मत, दिलिपकुमार यादवले ११० मत ,मणिगैरेले १०८ मत ,दिपक कुवरले १०७ मत र नारायण भटराइले ९५ मत ल्याउनु भएको छ । संयुक्त प्यानलका विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका प्रतिस्पर्धी दिपक अनुरागीको ६५ मत र पिताम्वर घिमिरे (हरि) को ४९ मत आएको छ । यता बुधबार बिहान ११ बजेबाट ५ बजेसम्म भएको मतदानमा कुल १६६ मतदाता मध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात १५४ जना पत्रकारहरुले मतदान गरेको निर्वाचन संयोजक नारायण पौडेलले बताउनुभयो । जिल्लामा अध्यक्ष सहितका सबै पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएपनि महिला उपाध्यक्ष र ७ खुला सदस्यका लागि मतदान भएको हो ।
यसैगरि १२ जना प्रदेश पार्सद र ४ जना केन्द्रिय पार्सद यस अघि नै सर्वसम्मत निर्वाचित हुनु भएको छ । अबको केहि समयमानै मतगणना सुरु हुने जनाइएको छ ।अनुपस्थित हुने १३ जनामा सबैभन्दा धेरै प्रेस चौतारीका रहेका छन् । प्रेसचौतारीका ९ जना सदस्य जिल्ला वाहिर रहेकाले चुनावमा उपस्थित भएनन् ।